Njengoba lisetshenziswe Hillers Potato
Abalimi abaningi kule endala esetshenziswa hilling amazambane amageja abavamile. Phakathi naleso sikhathi, esikhathini sethu akudingekile ukwenza omningi ukuzikhandla futhi ulahlekelwe isikhathi esiningi ukuze afeze ukwenza inqubo enjalo. Hillers ekhiqizwa amazambane ngokuzenzakalelayo le nqubo. Lokhu imishini ihlukaniswe izinhlobo ezintathu eziyinhloko, ngamunye ephethe pluses yayo kanye minuses. Ake sicabangele ngokukhethekile idatha design netindlela ikakhulukazi ukusetshenziswa yabo.
Imishini elula kakhulu futhi engabizi ezibhekwa Hillers Potato nge ububanzi njalo. Ababona lula kakhulu ukusebenzisa, kodwa isibambo amazambane ensimini encane basengaba ukuzisebenzisa. Ngesikhathi esifanayo acabangele ububanzi ikhaba kuyadingeka ngisho amazambane betshala kungenjalo ukuchitha messing bezungeza nokusetshenziswa lamasu ngeke kwenzeke. Akubalulekile ukusebenzisa leli thuluzi mhlabathi omanzi kakhulu. UMhlaba ngeke babhajwe phezu lomshini bese umsebenzi kuyoba nzima. Lokhu imishini yakhelwe ongaphakeme amandla tillers - kuze kufinyelele 3.5 l / s.
Uhlobo lwesibili mathuluzi - Hillers Potato ububanzi variable - okuvame kakhulu. Sebenza ukuqalisa le indlela kungase kushintshwe yinoma yimuphi imigqa ububanzi. Ukuyisa idinga Motoblock kunalokho enamandla - 3.5 l / s. Ukuze sisebenze ukusetshenziswa kwalo ikani nomhlabathi usemanzi. Kulokhu imishini akuyona okuningi bome inhlabathi, njengoba Uhlobo lokuqala. Nokho, kubiza kakhulu futhi Yiqiniso, kudinga amandla.
I elula kunazo namuhla kubhekwe disc Hillers Potato. Lolu uhlobo elula kwemishini. Ziyakwazi kulula kakhulu ukusebenza. Abakwazi kushintshwe ngasiphi imigqa ububanzi. Zihambisana umhlaba ngaphansi emikhulu ngokusebenzisa kwabo etholakala ngenhla.
amaholide babevame ukutshala amazambane Hillers ncamashi zalolu hlobo. Ngosizo lezi emikhulu bafa bese batshala nezilimo eziyizigaxa noma emikhulu noma imisele, njengoba umuntu ngokunethezeka. Backfilled inhlabathi zokutshala impahla Goal motor ungumlimi. Kuwufanele imishini enjalo kuyabiza izinhlobo ezimbili zokuqala Hillers okuningi. Nokho, unikezwa kahle kwabo okungavamile, ukuzisebenzisa ukucubungula amazambane Amasimu kungaba kuhle kakhulu.
Ngaphezu kwalokho Hillers ngoba motoblocks akhona futhi ongakhetha mathupha. Ziyakwazi ingasaphathwa evumelana ukuyisebenzisa. izingcweti Abaningi baye bakwenza imishini efanayo bebodwa. Uma le ububanzi ayilungiswanga. Nokho, ngesikhathi imisebenzi ukushintsha ububanzi impango kungenziwa wangcwatshwa ucishe iphuzu Hiller walihlanganisa nomhlabathi phansi. Uma imigqa ewumngcingo, ingcindezi isibambo ayidingi kakhulu. Umklamo onobuhle ezifana zinikezwa izibambo kokubili front futhi bakhulise. Lapho imishini hilling eshukunyiswa abantu ababili. Esinye isisebenzi ukudansela isiginci sakhe phambi, omunye odlulela kusuka emuva. indlela enjalo zingahlungwa izindawo ezincane kuphela ngoba ukuzikhandla owenziwe kulesi simo kakhulu.
Ridging nokutshala amazambane Hiller-motor-block (njengaku samuntu ngesandla) iyehlisa isikhathi kanye zabasebenzi. A Splurge kancane nokuthenga imishini enjalo endaweni suburban, nakanjani kunomvuzo.
Ezintanjeni zikagesi futhi ukufakwa yabo
Ukuqinisekisa amamitha amanzi ikhanseliwe? Ingabe ukuqinisekiswa amamitha amanzi sahoxiswa?
Electric upende sprayer - ithuluzi esisemqoka imidwebo
Indlela ukukhetha esiqandisini
Intuthu abalandeli: izici zohlelo lokusebenza
Ferroli - igesi boilers. Ukushayela, imiyalelo ezisebenza, ukubuyekezwa
Angikwazi ukuzwa interlocutor ocingweni: ukuxazulula inkinga
"Renault Sandero": Tuning Ukucaciswa
Amagama Isi-Chuvash ka
Indlela ukukhetha imoto intombazane?
Igolide Wugqinsi ukuzimisela esekelwe kwabantu isampula
"Mikostop" (spray) - ikhambi ohlasela. Indlela yokusebenzisa isifutho "Mikostop"?
Isaladi "i-appetizer yesiGreki" nobhontshisi: iresiphi ebusika
"Arizona" - itiye kwabasha kanye asebenzayo
Indlu yezindela zaseKonstantin-Elenin endaweni yokuLeninskoye
Indlela ukunciphisa umzimba ngaphandle yokudla nokuvivinya umzimba? Ulahlekelwe isisindo unaphakade: amathiphu
Ukumaka - is yokuzivikela amalungelo nezithakazelo izingane ezincane ishiywa ngaphandle ukunakekelwa kwabazali, asebekhulile nabakhubazekile
Ulimi "Salty": Yiziphi izici?